Xa uPhando, uPhicotho-zincwadi, kunye ne-Disavow Backlinks ukuze uphucule izikhundla zokukhangela | Martech Zone
Xa uPhando, uPhicotho-zincwadi, kunye ne-Disavow Backlinks Ukuphucula iiRenki zoPhando
NgoLwesibini, Novemba 2, 2021 NgoLwesibini, Novemba 2, 2021 Douglas Karr
Kudala ndisebenzela abathengi ababini kwimimandla emibini eyenza inkonzo yasekhaya efanayo. Umxhasi A lishishini elimiselweyo elineminyaka engama-40 yamava kummandla wabo. Umxhasi B mtsha malunga neminyaka engama-20 yamava. Sigqibe ukuphumeza indawo entsha ngokupheleleyo emva kokuba sifumene umxhasi ngamnye ofumene amacebo okukhangela akhathazayo avela kwiiarhente zabo:
Reviews -Ii-arhente zipapashe amakhulu amaphepha ngamnye kunye nokuphononongwa okukodwa kwinto nganye equlethe umxholo omncinci ngaphandle kwenkonzo kunye nezivakalisi ezimbalwa ekuphononongeni. Kwakucacile ukuba injongo yabo apha yayikukuzama ukusebenzisa amagama angundoqo kwijografi kunye nenkonzo enikeziweyo.
Amaphepha eNgingqi -Iiarhente zipapashe uninzi lwamaphepha angaphakathi aphinda aphindaphinda umxholo wenkonzo yasekhaya enikezelweyo kodwa ichaze isixeko okanye idolophu eyahlukileyo kwisihloko kunye nomzimba. Injongo apha yayifana… ukuzama ukusebenzisa amagama angundoqo ejografi kunye nenkonzo enikiweyo.
Anditsho ukuba eli liqhinga eli asi kusetyenziswa, ibikukuphunyezwa okucacileyo nokungenabuqhinga komxholo ekujoliswe kuwo kunye nenkonzo. Andingomlandeli wesi sicwangciso konke konke, sifumene impumelelo engakholelekiyo ekuchazeni ngokulula iindawo zenkonzo kumhlaba ongezantsi, ukuquka idilesi yendawo yeshishini (ii) emazantsi, kuquka inombolo yefowuni (enendawo yasekuhlaleni. ikhowudi), kwaye emva koko upapashe ulwazi oluqinileyo kumzimba wephepha malunga nenkonzo.
Akukho kwaphela isizathu sokuba iphepha elifulelweyo, umzekelo, lingabekwa kakuhle kwi "Roofing Contractor" kuyo yonke imimandla apho unokontraka asebenza khona. Ndingathanda ukusebenza ekuphuculeni nasekuphuculeni iphepha elinye lokufulela kunokuba kufuneka yenza kwaye ulandelele amaphepha amaninzi omthengi.
Okona kubi kakhulu, bobabini aba bathengi bebengafumani nakuphi na ukukhokela kwindawo yabo kwaye amanqanaba abo awazange aphume kwisithuba esingangonyaka. Kananjalo, iiarhente zabo ngokwahlukeneyo zingabanini besiza(ii) kunye nearhente enye owned domain reubhalo. Ngoko ke… yonke imali ababeyityala yayingabasondezi ekukhuliseni ishishini labo. Baye bagqiba kwelokuba banike inkampani yam ithuba lokusebenzisa iqhinga elitsha.
Kubathengi bobabini, sisebenze ukwandisa ukhangelo lwabo lwasekhaya ukubonakala ngokwakha indawo esanda kulungiswa, ukuthatha i-drone kunye nangaphambi / emva kweefoto zomsebenzi wabo wangempela endaweni yokufota isitokhwe, ukuqaliswa kwamaphulo okuphonononga okuphononongwa, ukwahlula kwabo bakhuphisana nabo, kuqondiswe ngokufanelekileyo amawaka amakhonkco angaphakathi kumaphepha afanelekileyo, kwaye sele ukusebenza ekwandiseni ukufikelela kwabo kuYouTube, ekuhlaleni, kuluhlu lwezalathiso, kunye nabalawuli beekontraka zabenzi.
Ukwenziwa nini uPhicotho lweBacklink
Into elandelayo eyenzekayo yathi:
Umxhasi A – abo besisebenze kwelona xesha lide, bebengaphuculi ukubonakala kwenjini yokukhangela ngaphandle kwamagama angundoqo anegama. Siqhubekile nokwandisa amaphepha, aqhagamshelwe umva kuYouTube, ahlaziywa ngaphezulu kwe70 yezalathisi… kwaye kusenzima nakweyiphi na intshukumo. Isitshixo ibikubona amagama aphambili angenagama ayisoze yanyuka… zonke zingcwatywe kwiphepha lesi-5 nangaphezulu.
Umxhasi B -Kwisithuba seveki yokupapasha indawo yabo baxele ukuba bafumana izikhokelo ezilungileyo, kwaye amanqanaba abo anyukile non-brand amagama aphambili.
Emva kokuphanda ukhuphiswano lwabo kunye nokwandisa amaphepha abo iiveki, kuye kwafuneka sembe nzulu ukuba kutheni Umxhasi A ibingashukumi. Ngenxa yezicwangciso ezithandabuzekayo esele zisetyenzisiwe, sifuna ukujonga umgangatho we-backlinks kwindawo yabo. Kwafika ixesha lokwenza a Uphicotho lwe-backlink!
Uphicotho lwe-backlink luchonga zonke izixhumanisi kwindawo yazo okanye kumaphepha angaphakathi kunye nokuhlalutya umgangatho weendawo apho i-backlink ikhona. Uphicotho lwe-backlink lufuna umntu wesithathu Sixhobo se SEO... kwaye ndiyasebenzisa Semrush. Ngokusebenzisa olu phicotho, unokwazi ukuchonga amakhonkco avela kwiindawo eziphezulu kunye nee-backlink ezimbi (ezaziwa ngokuba yityhefu) omele uzisuse okanye wazise iGoogle.
Ziziphi iiBacklinks ezimbi?
Nantsi imboniso enkulu yevidiyo ye-backlinks kwaye yintoni amakhonkco amabi, asetyenziswa njani ngabasebenzisi be-SEO ye-blackhat, kunye nokuba kutheni bephula imigaqo kaGoogle kwaye kufuneka baphetshwe ngazo zonke iindleko.
Ukuphicothwa kwe-Backlink kunye ne-Diavowing Backlinks
usebenzisa SemrushUphicotho lwe-backlink, sikwazile ukufumana ujongo olucacileyo kwimimandla kunye namaphepha abhekiselele kwisiza sabo:
Nceda ugcine engqondweni ukuba izixhobo ezifana Semrush ziyamangalisa kodwa azikwazi ukuhlalutya zonke iimeko zomthengi ngamnye. Kukho umahluko omkhulu, ngokwezibalo, phakathi kweshishini elincinci lasekhaya kunye nenkonzo yamazwe ngamazwe okanye yeelwimi ezininzi kwi-intanethi. Ezi zixhobo zidla ngokuphatha zombini ngokulinganayo endikholelwa ukuba sisithintelo esiqatha. Kule meko yalo mxhasi:
Itotali ephantsi -Ngelixa le ngxelo ithi, ogqibeleleyo, Andivumi. Lo mmandla unenani eliphantsi le-backlinks epheleleyo ngoko ke ukuba ne-backlink enetyhefu ngokwenene - ngokombono wam - kwakuyingxaki.
uphawu - Ngelixa ikhonkco elinye kuphela lahlelwa njenge yityhefu, Ndafumana ezinye iikhonkco ezininzi ezazikho U krokrela kuphicotho-zincwadi kodwa zaziphawulwe ngaphantsi komqobo oyityhefu njenge Khu selekile. Zazikumaphepha angafundekiyo, kwimimandla engenzanga ngqiqo, kwaye oko akuzange kuzise i-traffic ebhekiselele kwindawo.
UGoogle ubonelela ngendlela yokubazisa xa ezi khonkco zibi zikho, inkqubo yaziwa ngokuba yi disavow. Ungalayisha ifayile ebhaliweyo elula edwelisa imimandla okanye ii-URL onqwenela ukuzikhupha kwisalathiso sikaGoogle xa usenza isigqibo sokuba indawo yakho kufuneka ibekwe njani na.
Disavow -Ndifunde amanqaku amaninzi kwi-intanethi apho iingcali ze-SEO zisebenzisa izixhobo ze-disavow ukunika ingxelo ngokukhululekileyo ngeetoni zemimandla kunye namaphepha kuGoogle. Ndiyi-conservative ngakumbi kwindlela yam ... ukuhlalutya ikhonkco ngalinye malunga nomgangatho wesayithi, i-traffic ebhekisela kuyo, umgangatho wayo jikelele, njl. Ndihlala ndikhetha kwicala lokulahla isizinda esipheleleyo kunephepha ngokunjalo.
Endaweni yokusebenzisa isixhobo sikaGoogle se-disavow, ungazama ukuqhakamshelana nomnikazi wendawo ekubhekiswa kuyo ukuze asuse ikhonkco… kodwa kwezi spammy, iisayithi ezinetyhefu, ndihlala ndifumanisa ukuba akukho mpendulo okanye akukho lwazi loqhagamshelwano kwaphela.
Izixhobo ezikhoyo ngeSemrush zicingelwe kakuhle ukugcina indawo yakho okanye abathengi bakho. iiprofayili ze-backlink. Ezinye zeempawu esizibonelela ngazo isixhobo:
isishwankathelo – ingxelo oyibona ngasentla.
Uphicotho -uluhlu olubanzi lwe-backlink nganye efunyenwe kwisayithi yakho, ityhefu, iphepha lendawo, isicatshulwa se-anchor, kunye nezenzo onokuthi uzithathe, njengokwenza umhlophe okanye ukongeza i-domain okanye iphepha kwifayile yombhalo we-disavow.
Disavow -ukwazi ukulayisha ifayile yakho yangoku ye-disavow kwindawo okanye ukhuphele ifayile entsha ye-disavow ukuze uyifake kwi-Google Search Console.
umkhondo -ngokudityaniswa kuGoogle Search Console kunye neGoogle Analytics, i-disavow yakho ngoku inokulandelelwa ngaphakathi kwakho Semrush iprojekthi yokubona impembelelo enayo.
Nanku umfanekiso wekhusi we Uphicotho lwe-backlink … Kuye kwafuneka ndisuse ulwazi lomxhasi kwindawo, ekujoliswe kuyo, kunye ne-ankile umbhalo njengoko ndingafuni ukhuphiswano lokubona ukuba ndisebenza kubani.
Ifayile yokubhaliweyo ye-disavow eyakha iSemrush kwaye igcinelwe wena igqibelele, ibizwa ngomhla kwaye iquke izimvo kwifayile:
Inyathelo elilandelayo kukulayisha ifayile. Ukuba awusifumani iSixhobo sikaGoogle seDisavow kwikhonsoli yokukhangela, nali ikhonkco apho unokufaka khona ifayile yokubhaliweyo yeDisavow:
Emva kokulinda iiveki ezi-2 ukuya kwezi-3, ngoku sibona intshukumo kumagama angundoqo angengophawu. I-disavow iyasebenza kwaye umxhasi ngoku uyakwazi ukukhulisa ukubonakala kokukhangela okungaphawulwanga.
Ungaze Uhlawule iiBacklinks
Uqikelelo lwam lwelokuba ifemu yokugqibela ebilawula isiza somthengi ibisenza i-backlinking ehlawulwayo ukuzama ukuphucula umgangatho wayo jikelele. Eli lishishini eliyingozi… yindlela entle yokugxothwa ngumthengi kwaye utshabalalise ukubonakala kwe-injini yokukhangela. Soloko unyanzelisa ukuba i-arhente yakho ichaze ukuba ngaba benza olo hlobo lomsebenzi ngaphambili.
Ngenene ndenze uphicotho lwe-backlink lwenkampani eyayisiya esidlangalaleni kwaye eyayityale imali kakhulu kwi-SEO eqinile kwiminyaka eyadlulayo. Ndiye ndakwazi ukulandelela ngokulula amakhonkco emva Qhagamshela iifama babesakha ukukhulisa ukubonakala kwabathengi babo. Umxhasi wam wayiyeka kwangoko ikhontrakthi emva koko wandicela ukuba ndisebenze ekuqhawuleni amakhonkco. Ukuba abantu okhuphisana nabo, imithombo yeendaba, okanye uGoogle ebechonga la makhonkco, ishishini labathengi belinokutshatyalaliswa… ngokoqobo.
Njengoko bendiyicacisele umxhasi wam… ukuba ndinokulandelela amakhonkco ndibuyela kwifemu yabo ye-SEO ngezixhobo ezifana Semrush. Ndiqinisekile ukuba amawakawaka ee-PhDs zokwakha ii-algorithms kuGoogle anokuba nako. Basenokuba banyukile isikhundla kwixesha elifutshane, kodwa ekugqibeleni babeza kubanjwa besaphula iMigaqo yeNkonzo kaGoogle kwaye-ekugqibeleni - bonakalise uphawu lwabo ngokungenakulungiseka. Singasathethi ke ngeendleko ezongezelelweyo zokuba ndenze uphicotho-zincwadi, i i-backlink forensics, emva koko i-disavows ukuzigcina zihamba.
Indlela efanelekileyo yokufumana i-backlinks kukuba bazuze. Yakha umxholo obalaseleyo kuyo yonke imidiya, yabelana kwaye ukhuthaze umxholo obalaseleyo kuwo onke amajelo, kwaye uya kufumana i-backlinks engakholelekiyo. Ngumsebenzi onzima kodwa akukho mngcipheko obandakanyekayo kutyalo-mali olwenzayo.
Ukuba ukwinqanaba elinzima kwaye ufuna uncedo, sincedisa abathengi abaninzi ngemizamo yabo yokuphucula injini yokukhangela. Buza wethu SEO Consulting kwindawo yethu.
Ukubhengeza: Ndingumsebenzisi wamandla kwaye ndiyazingca Semrush kwaye ndisebenzisa amakhonkco am adibeneyo kulo lonke eli nqaku.
tags: Uphicotho lwe-backlinki-backlink forensicsiprofayile ye-backlinkukuxhuma umvakukunikaI-backlinks ezimbiamakhonkco amabidisavowikhonkco lokukhangela kuGoogleindlela yokwenza uphicotho lwe-backlinkindlela yokuphanda i-backlinksikhonkco detoxlink forensicslinkresearchI-backlinks ehlawulelweyoenjini yokukhangela nounsemrushSemrush backlink izixhoboSEObacklinks ezinetyhefu
UmthengisiSmile: Kutheni kufuneka Ukhuphe Iqela lakho leNkxaso ye-Ecommerce
Mar 5, 2013 ngo 1:46 PM
Ingathi ubusazi ukuba bendiyenza lento ebusuku. Ngaba ukuhlanjululwa kwazo zonke i-backlinks kodwa kwiphepha lasekhaya lesayithi ngokutshintsha ii-URL kwaye kungekhona i-301ing kubo - i-PITA enkulu. Kuya kuthatha iinyanga kodwa yiyo loo nto ndifumana umnqwazi omnyama ongwevu.
Kuya kufuneka ulahle iphepha lasekhaya
Sep 6, 2013 kwi-11: 31 AM
Yindlela elula mfondini . Ngena nje kwi-LinkResearchTools kwaye okunye baya kukwenza ngokuzenzekelayo. Ndifunde inqaku malunga nendlela yokuphepha iPenguin ngeendlela zezandla. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 ngo-6:42 AM
Xa ndisebenzisa uPhando loQhagamshelwano kunye ne-Link Detox ndadana kakhulu ngenkonzo kunye nesiphumo. Akwenzekanga nto ingako, kwaye andizange ndinikwe ncedo lungako xa ndandilufuna. Ndagqiba ekubeni ndisebenzise i-Auditors Link ukuze ndilungise i-backlinks yam emva kokubona ukuhlaziywa okuhle kakhulu kwiiforamu ezahlukeneyo. Inkonzo yabo yayingcono kakhulu! Baneqela elisoloko likhona ukuze likuncede ngemibuzo okanye ngeengcebiso. Ndisebenzisa izixhobo zoMphicothi-zincwadi zoQhagamshelwano, ndiye ndakwazi ukufumana onke amakhonkco am anetyhefu, ndawasusa onke ngokupheleleyo. UJason, ilungu leqela endithethe naye, wayeluncedo kakhulu kwinkxaso yefowuni. Wayeziphulaphula iingxaki zam waza wachaza kanye oko kwakungalunganga. Emva kokuba eyenzile le nto wandixelela ukuba zeziphi izixhobo eziya kundisebenzela kakuhle.
Ndisebenzisa izixhobo zoMphicothi-zincwadi zoQhagamshelwano, ndifumene idatha eneenkcukacha kakhulu, ndibone kakuhle ukuba ngawaphi amakhonkco andenzakalisayo kwaye bendisazi ukuba zeziphi amakhonkco ekufuneka zisuswe. Ukusebenzisa isixhobo sabo sokususa kwakulula kakhulu njengoko izenzekelayo ngokupheleleyo kwaye ikhawuleza kakhulu. Ndisebenzise izixhobo ezahlukeneyo zokususa eziye zafumaneka kwi-intanethi, kwaye eyabo yayiyeyona ilungileyo!
Nov 28, 2013 ngo-4:31 AM
Ndisebenzise i-Link Auditors. Bandinceda kakhulu kuphicotho-zincwadi lwam, bendinika inkxaso xa ndiyidinga kwaye bendicacisela ingxaki yam. Enkosi ngokuthumela oku njengoko ndicinga ukuba abantu abaninzi kufuneka bazi ngabo. Inkonzo abayinikezelayo iyamangalisa, ithembekile kwaye kulula ukuyenza.